W09 alwaax wareega 10W soosaarayaasha xamuulka degdega ah ee bilaa wireless | M-Boqoradda
W09 alwaax wareega 10W xeedho xawli ku socda
W09 waa xayeysiis xayeysiis 10W Qi-karti-u-qalma oo loogu talagalay dhammaan qalabka qi karti leh. Waxay ku habboon tahay 5W / 7.5W. Its smart IC waxay leedahay xakameynta heerkulka iyo dareeraha casriga ah ee heshiisyada wireless ee kala duwan si ay kuugu hagaajiso heerka korantada. Xeedho amarka wireless-ku wuxuu bixiyaa amni aamin ah oo lagu kalsoonaan karo. Samsung iyo iPhone xeedho wireless la jaan qaada, waxay la shaqeeyaan iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Nokia 9, Huawei Mate 10, Nexus 4, 5, Lumia 920 iyo aalado kale.
Iyada oo la adeegsanayo iftiinka iftiinka iftiinka LED-ka, oo tilmaamaya amarka iyo soo saarista, wax dhibaato ah uma leh noloshaada iyo shaqadaada.
Suufkayaga lacag-bixinta ayaa lagu farsameeyay bamboo tayo sare leh, deegaan iyo xarrago leh. Dhumucda xeedho waa 10mm oo keliya. Waa sahal in lagu rido boorsadaada si aad ugu qaadatid meelkasta oo taleefankaaga ah adigoon ka welwelin tamarta maqan, qurxinta ugu fiican guriga ama xafiiska, xitaa hadiyad loogu talagalay asxaabta.
Lambarka Moodalka: MQ-W09
Isticmaalka: Telefoonka gacanta, Dhagaha
Qalabka Guryaha qoriga bamboo
Shaqaynta: Qi (Nooca ugu cusub WPC 1.2.4)
Dekedda: 1 x USB
Gelinta: 5V / 2A
Wax soo saarka: 9V / 1.67A, 5V / 2A
Awoodda wax soo saarka: 5W / 7.5W / 10W
Damaanad: 12 Bilood
Karti: > 72%
taleefanka gacanta acryl ABS si dhakhso ah u dalab
wireless xeedho Qi-Certified 10W Max loogu talagalay iPhone SE 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, AirPods, Galaxy S20 S10, Xusuusin 10 9
2020 universal Qi wireless xeedho
xayeysiis caato ah 10W lacag la'aan ah alwaax lacag la'aan ah iphone 8 + 10W
LED taleefanka gacanta alwaax la qaadan karo si dhakhso leh Qiimo xeedho xarago wireless
wareega alwaax qi wireless wireless 10W si dhakhso ah ugu xirxirida suufka miiska
Hore: W07 alwaax magnetic 15W qi wireless xeedho xawli leh
Xiga: W10 laba jibbaaran alwaax 10W xeedho xawli ku socda
W10 laba jibbaaran alwaax 10W xeedho xawli ku socda
Clips cusub USB Drive
Bangiga korantada gacanta ee diirran ee MQ-H13
10000mah LED light bank light oo leh Ultra Bright ...
W06 bir magnetic 15W qi wireless xeedho xawli leh